Snn Nepal साहेबज्यूको प्रेमिल पत्र – Snn Nepal
साहेबज्यूको प्रेमिल पत्र
रामु शाही ठकुरी
खै ! सम्बोधनका लागि शब्द खोज्दै जाँदा यही शब्द ठिक छ कि जस्तो लागेर प्रयोग गरिहाले, अप्ठ्याराे नमान्नु ल ।
मानिसहरु चन्द्रमासम्म पुगिसके अनि त्यो प्रविधिको जमानामा पत्र लेख्दै छु, देख्ने बित्तिकै (फेसबुक, म्यासेन्जरमा मन नपर्ने मान्छेको म्यासेज आउने बितिक्कै बेवास्ता गरेको जस्तो गरी) यसलाई पनि कतैको रद्दीको टोकरीमा शोभायमान नगराइदिनु है ।
के गर्नु देख्न त तिम्रो नामको अगाडि फेसबुकमा हरियो बत्ती बलेको देख्छु अनि लाग्छ त्यो हरियो बत्ती अनुमति हो मेरो कुरा तिमीलाई भन्नको लागि भनेर । तर म फेरि सम्झिन्छु कि यो त मेरो लागि मात्रै राखिएको कहाँ हो र ?
तिम्रो बारेमा त्यसरी सोच्ने अनगिन्ती मेरा प्रतियोगीको भीडमै मलाई उभिन मन नभएर, थोरै पुरातनवादी बनेको छु अनि सबैले बिर्सेको कुरालाई फेरि प्रयोग गर्दै छु । शिशिर ऋतु चलिराखेको छ, पतझडको मौसम छ अनि चिसो सिरेटोले पातहरु उडाएर उजाड भएका रुखहरु पनि खै किन हो बेजोडको आकृति हो झैँ लाग्छ । चिसो सिरेटोको लहर चल्दाखेरि, मेरा वरिपरिका सबै जना चिसोको कारणले दाँत किट्किटाइ रहँदा पनि मलाई वसन्तको महिनामा सिरीसिरी हावा चलेर शीतल भएको अनुभूति हुन्छ ।
धेरै बोल्ने मान्छे म अचेल धेरै शान्त भाको छु अरे ! धेरै नै जिस्किरहने मान्छे म अचेल गम्भीर भाको छु अरे ! कसैको वास्ता नगर्ने म अचेल सबैको निजीखोजी गर्ने भाको छु अरे ! अस्ति एकजना निकै पाका दाइले भने – हेर भाइ व्यवहारमा परिवर्तन हुनु भनेको मनमा नै परिवर्तन हुनु हो अनि मनमा परिवर्तन आउनलाई, मनैदेखि जोडिएको मान्छेको प्रभाव हुनुपर्छ ।​ अनि गम्न थाले यत्तिका वर्षसम्म केही गुनासो नगर्ने ती दाइ अनि मेरा बारेमा अनेक जानकारी दिने मेरा साथीहरुले यस्तो भन्नुको पछाडि के कारण छ ?
मलाई अरुको कुराहरु सुनिराख्न मन लाग्दैन तर तिम्रो कुरा बिना कुनै अवरोध सुनी राखौं जस्तो हुन्छ । मलाई धेरै बेरसम्म बोलिराख्न मन लाग्दैन तर तिमीसँग बोल्दै गर्दा खेरि बोलीमा बिट मार्नै मन लाग्दैन । अरुले के गरे, के गरेनन् मलाई कुनै चासो नै हुँदैन तर तिमी के गर्दै छौ अनि कस्तो महशुस गर्दैछौँ भन्ने चासो हरदम रहिरहन्छ ।
मलाई आफ्नो अरुसँगको सम्बन्धको कुनै सरोकार छैन तर तिम्रो अरुसँगको सम्बन्धको निकै चिन्ता र चासो हुन्छ । चलचित्रमा भने जस्तै अनि किताबहरुमा लेखे जस्तै भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने अनि केही गर्न मन नलाग्ने त हुँदैन मलाइ तर हरेक प्रहर अनि हरेक क्रियाकलाप अगाडि पहिला तिम्रो याद अन्तस्करणबाट प्रवाहित हुन्छ ।
मलाई आफ्नै हाँसोको कुनै अर्थ लाग्दैन तर तिम्रो हाँसोले मेरो दिनदिनै मिठासपूर्वक बनिदिन्छ । अरुको प्रशंसाको पुलिन्दा पनि एकदम फिक्का लाग्छ तर तिम्रो प्रशंसाको एउटा शब्द पनि मेरो जीवनको क्यानभासमा सबैभन्दा चम्किलो रंगले भरिपूर्ण लाग्छ ।
म भन्दिन तिम्रा लागि म ज्यान पनि दिन्छु, तर तिम्रो लागि ज्यानले सक्ने जति सबै गर्नेछु । म भन्दिन तिम्रो लागि संसार जित्छु तर तिम्रो एक हाँसोको लागि पूरै संसार नै बैरी भए पनि म तिम्रो पक्षमा सदैव टिक्छु । म भन्दिन तिम्रो लागि आकाशको तारा झारिदिन्छु तर तिम्रो आँखामा बिनाकारण आँशु झर्न दिनेछैन ।
तिम्रो बोलीमा जादू छ भन्दिन तर घन्टौसम्म पनि तिम्रो कुरा सुनिरहनेछु । यति धेरै प्रेम मनभित्र साँचेको छु नि ! यदि तिमीले नाइँ भन्छौ भने पनि तिमीलाई नराम्रो सोच्न सक्दिँन । कयाैँ घटना सुनिए जस्तै तिमीलाई कुनै तनाव नै दिन सक्दिँन ।​
जिन्दगी व्यावहारिकता चलेको छ । त्यसकारण असफलता हात परे पनि कैयाैँ असफलतामा रोजिएका नतिजा (जसले तिमीलाई चोट पुगोस्) म रोज्ने छैन अनि त्यसले तिमीलाई जीवनमा कहिले पनि घोच्ने छैन । सारा संसार प्रेममय भएको यो बेला, प्रेम अनि समर्पणको उदाहरणको चर्चा चलेको यो बेला, लेखेर तिम्रै सुन्दर नाम यो मेरो हातमा, प्रश्न छ मेरो तिमीलाई मेरो एउटै। के बन्नेछौ मेरै प्रियतमा ।​
यो संसारमा जे-जे उदाहरण छन्, जे-जे कुराका प्रमाण छन् प्रेममा एउटा प्रेमीले प्रेमिकालाई दिने तिनै चिज दिन्छु भनेर कसम त खाँदिन तर मेरो समर्पण सिर्फ र सिर्फ तिम्रै लागि दिनेछु, अनि मेरो पूरै प्रेमको परिमाण तिम्रै, केवल तिम्रै लागि मात्रै दिनेछु । प्रतिक्रिया सकारात्मक आयो भने पूरै जीवन रोमाञ्चित भएर बिताइदिनेछु अनि नकारात्मक आयो भने पनि तिम्रै यादले रोमाञ्चित भएर बिताइदिनेछु।
तिम्रो नाइँमा पनि प्रेमका नाममा चोट दिएर होइन बरु चोट नदिने वाचा गरेर मेरो तिमीप्रतिको प्रेम उजागर गर्नेछु । बिना कुनै स्वार्थ तिम्रो प्रेममा म डुबेको छु अनि यही चरित्रमा पूरै जीवन बिताइदिनेछु ।
उही तिम्रो प्रेममा चुर्लुम्म डुबेको प्रेमी
गीतकार लोकराज अधिकारीको गीत ‘केले भन्दा पिरतीले’ सार्वजनिक
जय बुद्धको दशै विशेष नृत्य प्रतियोगितामा रुपन्देही र दाङका कलाकारले समेत लिए भाग , १० टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने ।
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ सिजन-३ को उपाधि किरण गजमेरलाई